Ihe butere onwu na India | Njem zuru oke
Isi Ihe Na-akpata Ọnwụ na India
Ezigbo India | | India
N'oge a anyị ga-ewetara gị ọkwa nke na-ebute ọnwụ na India:
Ọrịa akwara makwaara dị ka ọrịa nke akwara obi. Ọ bụ ụdị ọrịa obi kachasị, na otu n'ime ihe kacha akpata ọnwụ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ọ bụghị naanị na India mana ụwa niile. Ọrịa a na - akpata ọbara ezughi oke n’obi akwara.
Ọrịa afọ ọsịsa ewere dị ka ihe nke abụọ na-akpata ọnwụ nke ụmụaka na-erubeghị afọ ise na ụwa, agbanyeghị na ha bụ ọrịa na-egbochi egbochi na ọgwụgwọ. Ọ dị mkpa iburu n'uche na mmiri na idebe ihe ọcha na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịfefe ọrịa afọ ọsịsa.
Ọrịa ume iku ume Ha bụ ọrịa na-adịghị ala ala nke na-emetụta akpa ume na akụkụ iku ume. Ọ bụ ọrịa na-efe efe nke usoro iku ume, nke rhinovirus na coronavirus kpatara. Ihe mgbaàmà ndị bụ isi bụ ịkwa iko na mkpọchi.
Obi nkolopu Ọ bụ necrosis ischemic nke ngwa, ya bụ, ọnwụ nke anụ ahụ n'ihi enweghị ọbara na mgbe e mesịrị oxygen. Ihe kachasị egbu ma na-egbu egbu bụ nnukwu myocardial infarction ma ọ bụ nke a makwaara dị ka nkụchi obi na-eme mgbe ọbara na-aghaghị ịgbasa site na mpaghara obi akwụsịla kpamkpam. Ọtụtụ nde nkụchi obi na-eme kwa afọ na India yana ụwa niile, nke ihe dịka ọkara nke ndị merụrụ ahụ nwụrụ.
Ọrịa ma ọ bụ flu na-ebute nje na-ebute ọnye ume iku ume nke elu - imi na akpịrị - akpa ume na adịkarịghị akụrụ. Ọ bụ ọrịa na-efe efe.
Ozi ndi ozo: Gini bu obodo kachasi egwu maka ndi oru nta akuko?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Isi Ihe Na-akpata Ọnwụ na India
Kedu ihe bụ ihe ndị kacha ewu ewu na India?
Esemokwu dị n’etiti India na West